DHAGEYSO:-Kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada shisheeye ee Amisom ayaa nin sarkaal ah ku jiiray inta u dhaxaysa Ceelasha biyaha iyo Afgooye,maydkiisana jidka kaga tagay!! | News From Somalia
DHAGEYSO:-Kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada shisheeye ee Amisom ayaa nin sarkaal ah ku jiiray inta u dhaxaysa Ceelasha biyaha iyo Afgooye,maydkiisana jidka kaga tagay!!
Kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada shisheeye ayaa nin sarkaal ah ku jiiray inta u dhaxaysa Ceelasha biyaha iyo Afgooye.
Maxamuud Hilowle ayey kolonyadu ku dul mareen deegaanka Calamada sida oo sheegay Col. Hilowle Ciise Hagareey oo kamid ah saraakiisha ciidanka DF, mana ahan markii ugu horeysey oo ku kacaan falkan oo kale ama kasii xun.
Col. Hilowle ayaa sheegay in ciidamada shisheeye aaney u istaagin sarkaalka ay jiireen, kaasoo daqiiqado kadib u geeriyooday dhaawac halis ah oo soo gaaray.
Halkan Ka Dhageyso Wareysiga Col. Hilowle.
Ciidamada shisheeye ayaa horey ugu caan baxay in ay jiiraan gaadiidka dadweynaha, askarta, ardayda iyo xoolaha, waxayna u muuqdaan in ay u dalaceen dilka saraakiisha dowladda Federalka ah.
Horey waxaa loo xusuustaa dhacdooyin naxdin leh.
Sannadkii 2011-kii dhallinyaro salad jimco ku dukaneysa bannaanka hore ee masjid ku yaala nawaaxiga Nambar Afar ayey si ula kac ah u jiireen.
Waxaa xigtay haweeney xaamilo ah oo ay Taangi ku dul marsiiyeen isgosyka KM4, taasoo lagu magacaabi jiray Falastiin Cali Cusmaan.
Bishii lasoo dhaafayna gaari Taxi ah iyo laba qofood ayey ku jireen Ex Baarlamaan, halka nawaaxiga madaarkana ay ku jiireen qof dhoofi lahaa sida uu sheegay taliyaha Taraafikada gobolka Banaadir Cali Gaab.
Halkan Ka Dhageyso Wareysiga Cali Gaab.
XOGTA WARKA RADIO ALFURQAAN.COM
This entry was posted in Amisom, Ashahaado la dirir!, Baarlamaanka, Banaadir Post, Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, CRD SOMALIA, Culumo Suu, DAMMU JADIID, Dastuur Daaquud, Dowlada Fewderaalka, Gabayo, Golaha Wasiirada, Hassan Sheekh Mahamud, Ictisaam, Igad, Islihi-Nairobi, ITOOBIYA, Kenya-Somalia, MAHIGA-UNPOS SOMALIA, Maleeshiyaadka ALPHA, Maleeshiyo Beeleed, Males Zenawi, Moqdisho, Musaveni, Neo-colonialism, NO NGO FOR SOMALIA, QAADKA, Qabyo Qoraal, QURBAJOOG-DANYUUSBARO, Qurbajoogta Somalida, Somali Media, Somalia, Turki & Itoobiya, Ugandha, Xarakatul Shabaabul Mujaahidiin, Xasuuqa Amisom, Xasuuqa Kenya, Xasuuqa Maleeshiyo Beeleedka, Xasuuqa Xabashida!!, Xerada Qaxootiga Badbaado and tagged Alshabaab, Amisom, Ashahaado la dirir, Banaadir Post, CRD SOMALIA, Kenya, Kenya-Somalia, Moqdisho, News From Somalia, Xasuuqa Amisom, Xasuuqa Kenya, Xasuuqa Maleeshiyo Beeleedka. Bookmark the permalink.
LOOMA OOYAAN:- XEERKA 4.5 IYO XUMAANTIISA XASAN GARGUURTE MA OGYAHAY?